Izinto zemibukiso-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Imisebenzi Yethu>Logistics Projekthi>Izinto zokubukwa
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yokuhlola nokuthuthuka, i-ejensi ephezulu kakhulu yezinkulungwane eziyishumi ezizungeze amazwe angaphezu kuka-200 emhlabeni, abakwaSohologistics bathola amakhono okukhombisa izinto zobuchwepheshe kanye nomkhakha wezentuthuko yezokuxhumana futhi ngokubambisana nezinkampani zombukiso zomhlaba nabanye abalingani. ahlinzeke ngamabhizinisi angenisa futhi athumele ngaphandle, kanye nemibukiso ngamaphakethe ochwepheshe, ukugcinwa kwempahla nokuhanjiswa kwemisebenzi ehlobene nemibukiso
Sisusa ukungahambisani nokuhamba kombukiso, amadokhumenti e-ATA, ukuhleleka kwamakhasimende, Ukuhlaziywa kwezehlakalo ukuze kukushiye ukhululekile ukugxila kwezinye izinto ezibalulekile zomcimbi wakho.
Kufinyeta esikwenzayo for Imibukiso, sinikeza:
Indlela elula, futhi elula yokuthumela idokodo
Ukufaka kanye neDisassembly
Insiza yokuhumusha okwenziwa esizeni
Ukulethwa Kwesikhathi Kwempahla Exhibits
Ngesikhathi wokuthumela Imibukiso Ngenisa
Ukuhamba Logistics kwemicimbi Yezemidlalo
Ukuhamba Logistics Kwezobuciko
Ukuhamba Logistics Kwemibukiso
Izici zokubonisa izinto
1. Ngenxa yesikhathi sendawo yezemidlalo nehholo lombukiso, ukulawulwa kwezimoto nezinye izinto, kubalulekile ukulethwa ngesikhathi, okusho ukuthi izimpahla azikwazi ukufika ngaphambi kwesikhathi noma sekwedlule isikhathi.
Ukulawulwa kwesikhathi okuqinile kokuxhumeka ngakunye nezinqubomgomo zasekhaya nezimfuneko zolimi.
2. Kudingeka kakhulu kumadokhumenti wokungenisa nokuthumela kwelinye izwe. Ngokubekwa kwezinto zokubukwa, kuvame ukwamukela isimemezelo sesikhashana sokungenisa kanye sokuthumela kanye nesimemezelo samadokhumenti e-ATA.
3. Strictly edingekayo kwi isembozo kwezimpahla. Kudingeka kusetshenziswe amabhokisi amaningi okufaka amaphakethe ukuze kuqinisekiswe ukutholakala kwamabhokisi, umswakama-ubufakazi nokuvimbela amanzi futhi kulula ukuwahlukanisa.
4. Izinto zokukhangisa nezinsimbi zobuchwepheshe ezisetshenziswa ngabakhombisi kumele zibe ngaphansi kokuhlolwa, ukubhaliswa kanye nelayisense ngamaSiko amaChina.
5. Izidingo zombukiso nokusebenza kokufakwa kwamamaki zidingwa ngokuqinile njengalemininingwane elandelayo: igama lombukiso, igama lombukiso, inombolo yombukiso, inombolo yephakheji nenombolo ephelele.
Inqubo yokuSebenza ye-Exhibition Logistics
1. Ukusayina yesivumelwano ezokuthutha
2. Ukwenza uhlelo lokuhamba
3. Ukuhlelwa kanye emaphaketheni
4. Imibhalo ye-ATA
5. Ukusetha iqembu leprojekthi
6. Ukusetshenziswa kwecebo lokuhamba
7. Impendulo yokulandela ngomkhondo
8. Ezokuxhumana esizeni nokuxhumana